Ahoana ny fomba mety hampiasana milina fametahana coil coer?
Milina fanodinana Transformer no fitaovana famokarana tena manan-danja indrindra amin'ny fizotran'ny famindrana. Ny fampandehanan-drivotra dia mamaritra ny toetran'ny mpanova sy ny coil tsara tarehy. Amin'izao fotoana izao, misy karazana masira fampitaovana telo ho an'ny fifindrana ...
Niditra teto amin'ny fiainantsika ny Silicone
Silicone dia niditra tamin'ny fiainantsika tamin'ny endrika samihafa. Ampiasaina amin'ny haingon-trano lamaody sy indostria izy ireo. Toy ny elastomera sy ny baoty dia ampiasaina ho an'ny fanaovana adhesive, mpandraharaha mifatotra, tapa-kofehy, tapa-dantelina ary tombo-kase seam. Raha ny tsiranoka sy ny emulily dia ampiasaina amin'ny famaranana vita amin'ny lamba, lubricant fibre ary p ...
tsiranoka silicone novolavolaina indray
Ny tsiranoka silicone novolavolain 'ny ranon-tava, satria karazana lamba malefaka vaovao no mampifangaro ny lamba volon-doko amin'ny organosilicon mba hahatonga ny lamba ho malefaka sy hoentina. Polyurethane, fantatra ihany koa hoe résin. Satria manana amboasera ureido sy amine-format mahery vaika izy io, afaka miampita rohy mankany anaty sarimihetsika izy io ...
Ny tatitra andramam-panadinana farany ataontsika D4 dia mifanaraka amin'ny fanambarana farany
Ny tatitra andramam-panadinana farany ataontsika D4 dia mifanaraka amin'ny fanambarana farany farany
Ny fitsipiky ny paikady dia manampy ny singa voafetra D4 amin'ny fanasana kosmetika, D5, izay mahomby amin'ny 31 Janoary 2018
- D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane) D4 - D5 (Decamethylcyclopentasiloxane) D5 - D6 (Dodecamethylcyclohexasiloxane) D6 Famerana ny D4 sy D5 ao amin'ny vokatra manokana momba ny tena manokana: Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) ary decamethylcy Dafaxia